प्रकाशित मिति: कार्तिक 24, 2076
सिरहा,कार्तिक २४ गते । ५ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका सिरहा जिल्लाको मिर्चैया नगरपालिका वडा नं. ६ का राजेश्वर साह अहिले मिर्चैयामा अटो चलाउँछन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै विदेश गएका उनी लामो समय देश बाहिर रहे । त्यहाँको कमाइले घरको कमजोर आर्थिक अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएपछि दोहोर्याएर विदेश नजाने निष्कर्षमा पुगे, करिब ५ लाख लगानी गरेर अटो खरिद गरे र आफैं चलाए । उनी अहिले सदरमुकाम आसपासका ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत लक्ष्य गरी अटोमा यात्रु बोक्छन् ।
मिर्चैया नगरपालिका वडा नं. ६ का राजेश्वर साह ५ वर्ष मलेसिया बसे । जोखिमपूर्ण काम गर्दा कतिबेला मृत्युको मुखमा पुगिने हो भन्ने त्रासका बीच ५ वर्षको मलेसिया बसाइलाई छोडेर अहिले उनले यहाँ आफ्नै गाँउमा उनले अटो किनेर चलाउन शुरु गरे । विदेशमा कमाएको पैसाले नपुगे पछि ऋण लिए र ५ लाखमा अटो खरिद गरे । उनी अहिले सदरमुकाम र आसपासका बजार क्षेत्रमा अटो चलाउने गर्छन् ।
यो पेशाबाट दैनिक ५ सय देखि १ हजार सम्म आम्दानी हुने गरेको अटो व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि दैनिक १ हजार आम्दानी गर्ने उनीहरुको सदरमुकाममा हुने विशेष कार्यक्रमहरुमा भने कमाइ पनि बढ्ने गर्दछ । कार्यक्रम पर्दा त दैनिक २ हजार देखि ५ सम्म आम्दानी हुने गरेको व्यवसायी श्रवण रजकले बताए । ‘रिजर्भ गरेर सदरमुकाम बाहिर जानु पर्दा अतिरिक्त कमाइ हुन्छ,’ रजकले भने ।
नगरपालिकामा अटो भित्रिएसँगै नगरवासीलाई आवजावमा निकै सहज भएको छ । व्यक्तिगत सवारी साधन नहुनेहरुका लागि अटोले निकै सहयोग पु¥याएको कल्यणपुर नगरपालिका वडा नं.६ का प्रदिप साहले बताइन् ।